UAE sy Bahrain no misitraka voalohany amin'ny fizahan-tany israeliana
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » UAE sy Bahrain no misitraka voalohany amin'ny fizahan-tany israeliana
Tsena fitsangatsanganana arabo (ATM), dia manantena fampiroboroboana fampirantiana sy mpitsidika marobe avy any Israel ary hatrany amin'ny faritra lavitra, maniry ny hanararaotra ny fandraisan'anjaran'i Israel amin'ny hetsika fivahinianana lehibe voalohany nataony tany Moyen Orient.
ATM, izay efa nanambara fa ny fanontana 2021 amin'ny fampirantiana fanao isan-taona, dia hatao mivantana ao amin'ny Dubai World Trade Center (DWTC) ny alahady 16 ka hatramin'ny alarobia 19 mey, dia nanatri-maso fiakarana goavambe, tsy amin'ny fanontanina avy any Israel ihany, fa avy amin'ny orinasam-pitaterana eran'izao tontolo izao izay manam-pahaizana manokana amin'ny fitsangatsanganana mankany amin'io faritra io.
“Taorian'ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana normalisasi'ny Emira Arabo Mitambatra, ny Ministeran'ny fizahan-tany Israel dia mikasa ny hanao dingana lehibe hampiroboroboana an'i Israel ho toerana fizahan-tany any UAE. Tafiditra ao anatin'izany ny fandraisana anjara voalohany amin'ny tsena fitsangatsanganana arabo miaraka amin'ny trano rantsankazo lehibe sy ny solontenan'ny solontenan'ny indostrian'ny fizahan-tany israel, ary koa ny fanatrehana ireo fivoriana amin'ny kaonferansa avo lenta ", hoy i Ksenia Kobiakov, talen'ny departemantan'ny fampandrosoana ny tsena vaovao, Ministeran'ny Israel an'ny fizahan-tany.
Mametraka izany ho eo amin'ny tontolon-kevitra, hoy ny Departemantan'ny Dubai momba ny fizahan-tany sy ny varotra varotra (DTCM), tamin'ny taona 2019, dia fitsangatsanganana 8.6 tapitrisa nataon'ny Israeliana, CAGR 9% tao anatin'ny dimy taona lasa. Ny halavan'ny fotoana hijanonana amin'ny 2022 dia vinavinaina ho 11.5 alina izay manondro ny fahavononanao hanao dia lavitra kokoa miaraka amin'ireo mpitsidika sy mpitsidika fialamboly mandrafitra ny 53% amin'ny tsena ivelany. Poloney, Frantsa ary toeran-kafa itodiana eropeana no manjaka ankehitriny, saingy i Torkia sy i Egypt no tanjona dimy voalohany, mampiseho ny fahalianany amin'ny toeran MENA.
“Ny fahalianana nasehon'ny Minisiteran'ny Fizahan-tany israeliana ary koa ireo matihanina momba ny dia hafa monina any Israel sy ireo mpandraharaha iraisam-pirenena manokana momba ny fitsidihana an'i Israel, dia niavaka. Tsena vaovao ho an'ny mpandraharaha miditra sy miditra ary hanome tosika tena ilaina amin'ny dia amin'ny faritra sy iraisam-pirenena, "hoy izy. Danielle Curtis, Tale fampirantiana ME, tsena fitsangatsanganana arabo.
"Saingy, tsy resaka fitsangatsanganana mivantana eo amin'i Israel sy UAE ary Bahrain fotsiny izany," hoy izy nanampy.
“Noho ny tambajotram-piaramanidina iraisam-pirenena mihombo eo anelanelan'ny El Al, Emirates, flydubai, Etihad ary Gulf Air, dia mety hisy fety lehibe ho an'ny fialantsasatra roa na fijanonana, na mandritra ny tongotra miditra na ivelany.
"Raha ny marina, hoy ny Ministeran'ny Fizahan-tany Israel, ny taona 2019 dia taona nisian'ny fizahan-tany sy fivahinianana masina niaraka tamin'ny mpitsidika 4,550,000, fiakarana 10.6% tamin'ny taona 2018 ary 350,000 2019 mahery no tonga tamin'ny Desambra XNUMX, rakitsoratra hafa.
“Ankoatr'izay, Jiosy 5.7 tapitrisa no monina any Etazonia, miaraka amin'i Frantsa, Kanada, UK ary Arzantina, samy manana ny vondrom-piarahamonina jiosy manan-danja misy azy ireo 450,000, 392,000, 292,000 ary 180,000. Betsaka no mandeha mitsangatsangana any Israel mba hahita havany sy hitsidika ireo tranokala mpivavaka, izay afaka manararaotra tambajotram-pitaterana iraisam-pirenena manitatra, ”hoy i Curtis.
Ankehitriny ao amin'ny 27th taona sy fiaraha-miasa amin'ny DWTC sy ny DTCM, ny lohahevitry ny fampisehoana amin'ny taona ho avy dia ny 'maraina vaovao ho an'ny dia sy fizahan-tany' ary ho fanohanana, tatitra nataon'ny Colliers vao haingana - MENA Hotel Forecasts, tombana fa 2021 dia ho taona iray fanarenana, miorina amin'ny fiheverana fa efa mihatsara ny fampisehoana hotely manerana ny faritra.
Ny fahasalaman'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany no lakilen'ny faritra. Talohan'ny areti-mandringana, ny fandraisana anjara mivantana amin'ny fivezivezena sy fizahan-tany mankany amin'ny harin-karena faobe afovoany Atsinanana dia nambaran'ny World Travel and Tourism Council (WTTC), hahatratra $ 133.6 miliara dolara amin'ny 2028.
Ka noho ny fihenan'ny vidin-tsolika sy ny fihenan'ny toekarena ankapobeny noho ny fameperana COVID-19 dia mazava fa hiankina amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany ny toekarena isam-paritra raha vao nankatoavin'ny vaksinina ny FDA ary nanomboka ny fizarana. Vao haingana tokoa i Emirates no nanambara fa ny fiaramanidin'ny fiaramanidina A380 dia afaka miasa tanteraka amin'ny telovolana voalohany 2022.
ATM 2021 dia handray anjara mavitrika amin'ny Herinandron'ny fitsangatsanganana Arabo ary sambany, ny endrika hybrid vaovao dia midika hoe ATM virtoaly mandeha herinandro taty aoriana mba hamenoana sy hanatrehany mpihaino marobe noho ny teo aloha. Ny ATM Virtual, izay nanomboka ny fiandohan'ity taona ity taorian'ny nanemorana ny ATM 2020, dia hita fa fahombiazana iray manintona mpanatrika 12,000 an-tserasera avy amin'ny firenena 140.
Ny endri-javatra manamarika hafa amin'ny Herinandron'ny dia any Arabia dia ahitana ny tsena iraisam-pirenena momba ny dia lavitra (ILTM) 2021, ary ny Travel Forward, ny teknolojia fitsangantsanganana. Ny ATM dia hiara-hiasa amin'i Arival ihany koa, izay amin'ny alàlan'ny andian-tranonkala dia handrakotra ny fironana ankehitriny sy ho avy ho an'ireo mpikirakira fizahan-tany sy mpitantana ny toerana.
Ny endri-javatra hafa dia ahitana ny Forums Buyers natokana ho an'ny tsena loharanon-kevitra lehibe anisan'izany i Saudi Arabia, India ary China miampy ny seha-pifandraisana haingam-pandeha virtoaly virtoaly, fihaonana an-tampon'ny hotely ary programa fizahan-tany tompon'andraikitra.
Ny seho dia hanaraka tsara ny torolàlana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana rehetra an'ny DWTC ary hivoaka hanome traikefa tsy misy tohika sy tsy misy tohika. Ny ekipa ao amin'ny DWTC koa dia nametraka fepetra maro isan-karazany ao anatin'izany ny fitondrana fanadiovana nohatsaraina, fanatsarana ny fivezivezeran'ny rivotra, tobin'ny sanitisera maro tanana ary fanamarinana ny mari-pana.
Ny ATM, raisin'ireo matihanina amin'ny indostria ho toy ny barometatra ho an'ny sehatry ny fizahantany Atsinanana sy Afrika Avaratra, dia nandray olona sahabo ho 40,000 tamina hetsika 2019 nisy solontena avy amin'ny firenena 150. Miaraka amin'ireo mpanentana 100 mahery nanao ny laharana voalohany, naneho ny fampirantiana lehibe indrindra avy any Azia ny ATM 2019.
Airbus: baikon'ny fiaramanidina 381 hatreto amin'ny 2020
IATA: Mitohy miadana kokoa ny fanarenana ny entan'ny rivotra